Dagaal dhex marey Muuse Suudi iyo Cumar filish
Subaxnimadii Arbacada Abaarihii 1:00am wuxuu dagaal si lama filaan ah uga dhex bilowdey Maleeshiyooyin kala Taabacsan Muuse Suudi Iyo Cumar Filish.
wararku waxey sheegayaan in Dagaalkaani ka bilowdey ka dib markii Maleeshiyo Taabacsan Cumar Filish ay dileen Nin Tagsiile ah ka mid ah Dadka Dagan Degmada Madiina.
ma jirto Cid sheegi karta inta uu gaarsiisan yahay Qasaaraha naf iyo Maalba leh ee uu geystey Dagaalkaani inkastoo wararka ugu horeeya ay sheeggayaan in Dhimashadu kor u dhaaftey ilaa 8 qof, halka wararkale ay dhimasha gaarsiiyeen ilaa 15 oo Labada Dhimac oo dagaalamayey ah, inkastoo ay aad u badan tahay Qasaaraha Gaarey Dadka Rayid ah.
si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay ee ay dagaal isaga hor yimaadaan Maleeshiyooyin kala taabacn labadaan Garab ee ay dirirto ka dhaxeyso.
Dagaalkaan ayeysan jirin Cid ilaa iyo hadeer kala dhex gashey xabada ayaa socota ilaa iyo 8:00pm.
waxaa baryahaanba magaalada muqdisho ka socdey Dadaal ay wadeen Siyaasiyiin uu ka mid yahay Muuse Suudi Yalaxoow lana hadal hayey in loogu talo galey Nabadeynta Gobolka Banaadir balse Dagaaladan kasoo Cusboonaanaya Xaafadaha Muqdisho ayaa loo fasiran karaa Dadaalkii Dagaal doonka.
Dhanka kale Shaley wuxuu iska hor imaad ku dhex marey Xaafada Xamarweyne kasoo dhashey khilaaf soo kala dhex galey Labo Shirkadood oo ah kuwa ka Ganacsada Sigaar kasoo geysatey Dhimasho iyo dhaawacba leh.
wararkuna waxey sheegayaan in ay ku dhinteen 6 qofood oo 4 ka mid ihi ahaayeen Dad Rayid ah. inta badan Dagaalada ka dhaca Gudaha iyo Daafaha Magalaadaan Muqdisho ayaa ah kuwo iska Caadi ah marka loo Eego Daagaalada Ujeeddo la'aan ta ah ee had iyo jeer ka dhaca Muqdisho.
Dareenka Dadka reer Muqdisho ayaan aheyn mid Rajo ka Qabbo iney ka Guddbaan Dagaallada Nuucaan ah, Allahse waa ka sari karaa.